शनिबार, १४ आषाढ, २०७६
वेद पुराण प्राणी हितका लागि हुन् । यसको अर्थ यो ज्ञान हिन्दु वा कुनै सम्प्रदायका लागि होइन सकल मानवका लागि हो । यदि यी कुनै साम्प्रदायिक धर्मका लागि हुन्थे त यहाँ ‘प्राणिहितो’को ठाउँमा अन्य धर्म ग्रन्थको जस्तै कुनै ‘सम्प्रदायाहितो’ हुन्थ्यो होला ।
पश्चिमका अनिश्वरवादी दार्शनिक ‘नित्से’ले भने जस्तो ईश्वरीय सत्ता नभएको होइन तर अस्तित्वमा भएको भन्दैमा श्रीमद्भागवत अन्धविश्वासको वकालत गर्दैन । बरू सामाजिक न्याय, आत्मबोध र अन्धविश्वासको विरुद्धमा श्रीमद्भागवतले हरेक समस्याको निरुपण गरेको छ । पुराणको विश्लेषण परम्परावादी कर्मकाण्डी तवरले भन्दा यसको लाक्षणिक अर्थको नवीन खोज र व्याख्यालाई प्रवचन गर्न सकिएमा संसारका सबै अस्थिरताको उत्तर पुराणमा भेट्न सकिन्छ । यो पुराणको रहस्यका बारेको अनुसन्धान वेलायत तथा अमेरिकामा भइरहेको छ । अमेरिकाको सन् फ्रान्सिस्को स्थित ‘एसियाली कला सग्रहालयको आर्ट ग्यालरीमा राखिएको श्रीमद्भागवत पुराणको तस्वीर यहाँं देख्न सक्नु हुनेछ ।
मानव सभ्यताका प्राचीन साहित्य, अति विशिष्ट र आदिम ग्रन्थहरू मध्ये यस श्रीमद्भागवत पुराणलाई पूर्ण पुराण मानिन्छ । मानव सभ्यताको पहिलो कृति र अति उत्कृष्ट दर्शनको रुपमा चार वेदलाई मान्यता दिइएको छ । योगी, तपस्वी तथा अलौकिक दर्शनिक वेदव्यास,जो नेपाल धरामा जन्मिएका थिए । उनले यसलाई तयार पारेको वैदिक साहित्यको प्रमाण छ ।
जन्मको आधारमा मानिसको कुनै जात हुँदैन भन्ने धर्मले नै बोलेको बलियो प्रमाण हो—भागवत पुराण । जसका लेखक स्वंय आजभोलि भनिने गरेको ‘आदिवासी जनजाति’ माझी पुत्र वेदव्यास थिए । यो पुराणको सहि विश्लेषण गर्ने हो भने वर्तमान जातिय छुवाछुत र विभेदजस्तो जघन्य मानव अपरालाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ । परासर ऋृषि र माझी पुत्री सत्यवतीको कोखबाट जन्मिएका वेदव्यासको जन्मथलो प्राचीन नेपाल थियो । ऋृषि परासरको जन्म र तपोभूमी नेपालको नवलपरासी जिल्लामा भएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । परासी र नवलपुर जोडेर नवलपारासी बनाइएको ऐतिहासिक तथ्य भेटिन्छ । तिनै आदिवासी वेदव्यासद्वारा रचित वैदिक साहित्यहरूमा चार वेद, १८ पुराण, १०८ भन्दा बढी उपनिषद्, महाभारतलगायत थुप्रै असंख्य मुल्यवान ग्रन्थहरू मानव सिर्जनाको सर्वोत्कृष्ट कालजयी रचना बनेका छन् । ऋृग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद र सामवेदको रचनापछि १८ पुराणहरू रचना गरेको मानिन्छ । भौतिक आकारमा हेर्दा यो पुराण १२ स्कन्ध, ३३५ अध्याय र करिव १८००० श्लोक निहित रहेको छ । युरोपियन भाषामा सबैभन्दा पहिला अनुवाद हुने पुराणमा यो भागवत पुराण पर्दछ । जुन स्तुत्य कार्य सन् १७८८ मा भएको ‘विकिपिडिया’को तथ्य छ ।
प्राचीन संस्कृत भाषामा लिखित यो ग्रन्थ भयावह कलियुगमा शान्ति प्राप्त गर्ने एक अनुपम वैदिक ग्रन्थ मानिन्छ । भागवत लीलामा आफूलाई लिन गराउँदैं ईश्वरप्रतिको भक्ति र प्रेम जगाउन यसले अहं भूमिका खेल्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ । कथात्मक शैलीमा लेखिएको यो ग्रन्थ सर्वसाधारणलाई सहजै वोधगम्य नहुनु स्वभाभिक हो । भ= भक्ति, ग= ज्ञान, व= वैराग्य र त= तरणीको सुन्दर संयोगमा श्रीमद्भागवत ज्ञानअमृत सजिएको छ । ईश्वर एक मात्र हो । जगतको उत्पत्ति, स्थिति र विनासको हेतु तथा आध्यात्मिक, आधीदैविक र आधि भौतिक (त्रयताप) तिनै किसिमका तापहरूलाई नाश गर्न सच्चिदानन्दस्वरुप भगवान श्रीकृष्णको शरणमा जानु मानवको लागि परमआनन्द प्राप्त गर्नु हो । जीवनको तत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने कलियुगको सरल मार्ग र साधना उल्लेख गरिएको सो ग्रन्थमा देवर्षि नारदको भक्तिसँगको भेटबाट पहिलो अध्याय प्रारम्भ भई कलियुगको धर्म, चार प्रकारका महाप्रलय र श्रीशुकदेवको अन्तिम उपदेश समाहित बाह्रौं अध्यायसम्म यो पुराण तन्किएको छ ।
यो पुराणमा उल्लेखित समय गणनालाई ‘नासा’ले समेत खगोल अनुसन्धानमा प्रयोग गरेको छ । जसअनुसार सत्य युगमा ४,८ यिबपद्दज्ञछ(mबलmभम(घण्ण्हद्दद्दछण्ण् दिव्य वर्ष, त्रेतामा ३६०० द्वापरमा २४००० र कलिमा १२०० दिव्य वर्ष हुन्छ । मानिसहरूको एक वर्ष देवताहरूको एक दिन हुन्छ र यसरी हेर्दा देवताहरूको एक वर्ष मानिसहरूको ३६० वर्ष हुन्छ । यसप्रकारले कलियुगको अवधि ४,३२,००० हुन आउँछ ।
यो पुराणको सातौं स्कन्धको ५ औं अध्याय अन्तर्गत २३ औं श्लोकमा भनिए अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त गरि मुक्तिका लागि नौ वटा भक्तिका स्वरुप देखाइएका छन् ।
श्रवणम किर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम् ।
अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ।।
इति पुंर्सार्पिता विष्णौ भक्तीश्चेण्णवलक्षणा ।
क्रियेत भगवत्यध्दा तन्मन्येक्धीतमुत्तमम् ।। —७.५.२३.
१. श्रवणम्ः सुन्दा पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ । लगातार पवित्र कुराहरू सुनिरहँदा हाम्रो अचेतन र सुक्ष्म दिमागमा नयाँ उर्जा सञ्चार हुन्छ र त्यसले, संस्कारमा सुधार आई आत्मबोध हुन्छ । त्यो मुक्ति महाराजा परिक्षितले सुकदेवबाट भागवत ज्ञान प्राप्त गरेका थिए ।
२ कीर्तनम्ः नाम संकीर्तन गर्दा शरीरमा उर्जाहरू चलायमान हुन्छन् । त्यसले मनलाई आफ्नो बसमा स्थिर बनाउँछ । ऋषि नारदले यसैबाट मुक्ति प्राप्त गरे ।
३ स्मरणम्ः सम्झना र स्मृतिलाई एकाकार गरी अन्तस्करणमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । भक्त प्रल्हाद यसका उदाहरण हुन् । हरेक पदार्थमा परमात्माको अंश हुन्छ । उर्जा नै चैतन्यको अर्को रुप हो । जुन कुराको आजका वैज्ञानिकहरू खुलेर प्रशंसा गर्छन् ।
४. पाद सेवनम्ः पाउको सेवा गरेर लक्ष्मी विष्णु नजिक भइन । यसको आधुनिक अर्थ, विष्णुको पाउको सेवाको अर्थ, कर्म नै ईश्वर हो र निस्वार्थ कर्म गर्दा धन प्राप्त हुन्छ र धर्म पनि एकैसाथ भइरहेको हुन्छ । अल्छी भाग्यको मालिक कहिल्यै बन्न सक्दैन् ।
५. अर्चनमः वाली राजाले त्यागको पूजा गरेर विष्णु प्राप्त गरे । त्याग नै पूजा हो । उनको नामबाट बलिदान शब्दको ब्युत्पत्ति भएको हो । आफैंभित्र रहेको षढ रिपूहरू रिस, राग, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यको त्याग गरेर मात्र भगवानको सच्चा पूजा हुन्छ । यसको गलत व्याख्या गरेर मानिसहरूले पशुबली दिने चलन चलाए जबकि यो पुराण यसको खिलाफमा छ । पूजा मन्दिर र चर्च, गुम्बा, मस्जिद तथा तीर्थ स्थान गएर मात्रै होइन बरू आफू भित्रको विकार फालेर हुन्छ । हरेक दिन आध्यात्मिक उपलब्धिको साधनामा हामी तल्लीन रहनु पर्छ । एक दिन यी सबै विकारबाट मुक्ति मिल्छ । त्यो मुक्ति नै आत्म ज्ञान र विष्णु वा नारायण वा परमार्थ प्राप्ति हो ।
महाराज प्रिथुले पनि यसरी नै बिष्णुको अर्चना गरेर तत्वज्ञान प्राप्त गरे ।
६. वन्दनमः अकुरले बन्दना अर्थात प्रार्थना गरेर मुक्ति पाए । प्रार्थनाको प्रचलनलाई पुराणले जब उल्लेख ग¥यो त्यसपछि उदाएका विभिन्न सम्प्रदायका व्यक्तिहरूले अपनाउँदैं गएका छन् । उपचारदेखि ईश्वर प्राप्ति समेतका लागि प्रार्थनामा बल निहित हुन्छ । दैनिक प्रार्थना सम्यक साधनाको एक महत्वपूर्ण अभ्यास हो ।
७. दास्यमः विना स्वार्थको सेवा नै भक्ति पथमार्फत मुक्तितर्फ लैजाने एक पथ हो । हनुमानजी श्रीरामको दासा बनेर देखाएको भक्ति त्याग र निस्वार्थ सेवाको उदाहरण हो । आधुनिक अर्थमा यो कर्म योग हो । गीताको आदर्श यसैसँग गाँसिएको छ । विवेकानन्द स्वामीको ‘कर्म गर निस्वार्थ कर्म नै ईश्वर हो’ भन्ने सिद्धान्त यसमा सम्बन्धित छ ।
८. सौख्यम ः अर्थात भगवानको मित्र बनेर मुक्ति मिल्छ । महाभारतमा अर्जुन श्रीकृष्णको मित्र र भक्त थिए । भगवानलाई डरले र लोभले हैन श्रद्धाले पूजा गरौं । भयबाट मुक्त हुन सक्दा मात्र ईश्वरको दर्शन वा मुक्ति हुन्छ भन्ने ओशोलगायत आनन्द मार्ग सम्प्रदायको मान्यतता यसैंसँग जोडिन्छ । साधु र सिद्ध पुरुष निडर हुन्छ । हाल प्रचलनमा रहेको ‘कपाली ध्यान’ यसै मान्यतामा आधारित रहेको छ ।
९. आत्मनिवेदनम्ः हामीले ईश्वरलाई केही दिन सक्दैनौं । जे अर्पण गर्छौ त्यो ईश्वरकै अनुकम्पा हो । उसले दिएर प्राप्त गरेकाले नै दान गर्नेले गर्न सकेका हुन्न तसर्थ दिने हो भने आत्म देउ । त्यो मात्रै ईश्वरलाई चढाउन सक्छौं । बालीले पनि सम्पूर्ण समर्पण गरेका थिए । ध्यान गर्नु, अन्तस्करणमा प्रवेश गर्नु र निज स्वरूप जान्नु नै ईश्वर प्रप्ति हो । तपाईं, म र सबै जीव ईश्वरकै अंश हो जब आत्ममुखी हुन्छौं तब मात्र सांसारिक दुःख बाट पार हुन सकिन्छ । शिवजीको ध्यानस्थ मुद्रा, विभिन्न देवी देवताको ध्यान मुद्रा यसैको प्रतीक हो । आजको दुनियाँमा मानिसलाई प्रकृतिको नजिक रहेर योग, ध्यान, प्रणायाम, आहार, विहार र ब्यवहार सन्तुलन गर्न यसले सिकाउँछ । यसै सन्दर्भमा भागवत गीताको १८ औं अध्यायको ६६ औं श्लोक
‘अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिश्यामि मा सुच’
भक्ति र मुक्तिका लागि आफू को हो चिन्दै आत्म चिन्तनमा पूर्ण समर्पित हुन विनय गरेको छ । यसले मनका इच्छा दबाएर हैन तिनका साक्षी बनेर सत्यको शरणमा आउ, त्यो नै परमानन्दको स्थिती हो भन्ने महान् दर्शन प्रस्तुत गरेको छ । आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिग्मण्ड फ्रायडले मनको वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत गर्दै भने ‘अधिकांश रोग इच्छाको दमनबाट सुरु हुन्छ ।’ जुन कुरा गीतामा पनि भनिएको छ, ‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्ष यो ।’ भागवतकै यो धारणा त्रिपिटकमा समेत भेटिन्छ, ‘इच्छा नै दुःखको कारण हो ।’
अर्जुनको दुविधायुक्त विषाद मनलाई पुनः उर्जाशील बनाउने विद्या पनि श्रीकृष्ण कै सुत्र हो । तसर्थ यसको पालनाले सांसारिक दुःख मेट्न सकिने निश्चित छ । प्रचार गर्दा यी सबै दर्शनहरू प्रति संवेदनशील हुने हो भने भागवत शिक्षा आधुनिक दुनियाँलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा रहेर शान्ति बाँड्ने महत्वपूर्ण दर्शन बन्न सक्छ ।
यसैगरी यो पुराणको सिङ्गो आत्मा छैंठौ स्कन्धको अध्यायको प्रथम अध्याय अन्तर्गत ४० औं श्लोकले ईश्वर एक मात्र छ भन्ने अद्वैत दर्शनलाई प्रकाशित गरेको छ । सत्य वेदको सार हो, सत्य दुई हुन सक्दैन । भनेर धर्मका नाममा भएको सबै विभाजनलाई अन्त्य गरेको छ ।
य अधर्मस्तद् विपर्यायः ।
वेदो नारायणः साक्ष्यात
वेद पुराण प्राणी हितका लागि हुन् । यसको अर्थ यो ज्ञान हिन्दु वा कुनै सम्प्रदायका लागि होइन सकल मानवका लागि हो । यदि यी कुनै साम्प्रदायिक धर्मका लागि हुन्थे त यहाँ ‘प्राणिहितो’को ठाउँमा अन्य धर्म ग्रन्थको जस्तै कुनै ‘सम्प्रदायाहितो’ हुन्थ्यो होला । तसर्थ यो पुराण र वेदका ज्ञान पूर्वाग्रहविहीन, सम्प्रदाय विहीन, छुवाछुत र जातीय प्रथा, बलिप्रथा, समाजमा देखिने धर्मका नामका शोषण, पाखण्डको विरुद्धमा उभिएर ‘तद् विपर्याय’ भनेको छ ।